ရူးသွပ်စွာနဲ့ ငါဟာ ပန်းရောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်
မိုက်မဲစွာနဲ့ ငါဟာ အနီရောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်
ငါ့ရင်တခုလုံး အရောင်မျိုးစုံ ပေကျံလို့ပေါ့
အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်တခု လှပစွာ
ငါဖန်ဆင်းလို့ နင်လျှောက်လှမ်းဖို့ ထားခဲ့ပြီမို့
လွတ်လပ်စွာ လျှောက်လှမ်းပါတော့ ချစ်သူ..........
မမသွယ် ပို့ ပေးစဉ်ကတော့ သူ့ အရောင်လေးတွေနဲ့ သူ သင့်လျှော်တဲ့ အရောင်လေးတွေနဲ့ ချယ်သထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ပါခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့မှာ တင်ဖို့လုပ်တော့ အဲဒီပုံတွေက Word file ထဲကဆိုတော့ တင်လို့ မရတာရယ် ၊ နောက်ပြီး တခြား ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲပြီး တင်ဖို့ကျတော့လည်း လိုင်းက ပုံကို upload တင်မရတဲ့ အတွက် သရုပ်ဖော် ပုံလေးများ နဲ့ ဖော်မပြနိုင်တာကို သည်းခံ ဖတ်ရှု ခံစားပေးကြပါလို့ ဆန္ဒပြုရင်း............။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:51 PM3comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:58 PM 13 comments Links to this post
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:13 PM3comments Links to this post
မမျှော်လင့်တဲ့ အချိန် မထင်မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ရှေ.ကို ပန်းတပွင့်ရောက်လာခဲ့တယ်.. ပန်းလေးက တကယ်ကိုနှစ်သက် မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်လို. ကိုယ်ထင်လိုက်တယ်…. တကယ်တော့ ကိုယ် က ပန်းချစ်သူ တယောက်မဟုတ်ခဲ့သလို ဘာပန်းကိုမှလည်း မနှစ်သက်တတ်တဲ့သူပါ….ဒီတော့လည်း ပန်းမကြိုက်တဲ့ ကိုယ်က ပန်းမပန်တာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး….ဒီတော့လည်း ကိုယ့်နှလုံးသားက ပန်းလေးတွေနဲ. မိတ်ဆွေမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူးပေါ့… လာမယ့်မွေးနေကျရင် ကိုယ့်နှလုံးသားလေးအတွက် ပန်းတပွင့် လက်ဆောင်ပေးဖို. ကြိုတင် စိတ်ကူး ထားလေတော့……..
ဒီပန်းလေး ကိုယ့်ရှေ.ရောက်လာတဲ့ အချိန် နှလုံးသားလေး အတွက် လှပတဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်လို. ပျော်ရွှင်စွာနဲ. စိတ်ကူးလိုက်မိတယ်.. နှလုံးသားလေးလည်း ဒီပန်းလေးကို မြတ်နိုးရှာတယ် ထင်ပါရဲ. သူ.ခမျာလည်း သူ.သခင် အလိုကျနေခဲ့ရလေတော့ ပျင်းရိရှာပြီနေမှာပေါ့လေ… သူ.အတွက် အဖော်ရ တော့မယ့်ဆိုပြီး ခုန်ပေါက်နေလိုက်တာ တဒိတ်ဒိတ်နဲ.ပေါ့….. ကိုယ့်အလိုကျနေပေးခဲ့တဲ့ လိမ္မာလွန်းတဲ့ နှလုံးသားလေး အတွက် သူနှစ်သက်တဲ့ ဒီပန်းလေးကို မွေးနေ. လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးမယ်လို. စိတ်ကူးပြီး မြတ်နိုးစွာ ကိုယ်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့…
အို ပန်းကလေးက အရောင်အဆင်းတွေလှပနေပေမယ့် ပိုးကိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ. ပြည့်နေတဲ့ ပန်းလေးတပွင့် ဖြစ်နေပါရောလား…… အဆင်းလှတဲ့ ပန်းပွင့်လေးရဲ့ ပွင်.ဖတ်တွေက ဒဏ်ရာ ဗလပွနဲ့ ဖြစ်နေလိုက်တာ… ကိုယ့်လက်ထဲက ပန်းလေးကို နှမြောတသစွာ ငေးကြည့်ရင်းဖြစ်ရလေ ပန်းကလေးရယ်….လို. သာ ရေရွတ်နေမိတယ်….
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပြည့်တဲ့အထိ သူ.ရဲ.ဆန္ဒကို ထိန်းချူပ်လို. ဦးနှောက်ဆန္ဒအတိုင်း နေပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားအတွက် ပိုးကိုက်ပန်းတပွင့်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် တရားပါ့မလား….. နှလုံးသားလေးကတော့ အဆင်းလှရှာတဲ့ ပန်းလေးကို ပန်ဆင်ချင်တယ်ထင်ပါရဲ……. မင်းအတွက် ဒီပိုးကိုက်ပန်းကိုတော့ မပေးရက်ဘူးလို. ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ညိုးငယ်လို. သွားလေရဲ. …. ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲ ပန်းကလေးရယ်…… ကိုယ့်မေးခွန်းကို ကြားလို. ကိုယ့် ဦးနှောက်က အပြေးအလွှား အဖြေပေးရှာတယ်…….. မရူးချင်ပါနဲ. တဲ့လေ…….
ကိုယ့်နှလုံးသားမွေးနေ.အတွက် လက်ဆောင်ပေးမယ့် ပန်းတပွင့်က အဆင်းမလှရင်တောင် အချင်းလှတဲ့ ပန်းတပွင့်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလား…… နှလုံးသားလေးက ဒီပန်းလေးကို မရရှာလေတော့ ဆန္ဒပြတယ် ထင်ပါရဲ….. ညိုးငယ်စွာနဲ. မစားမသောက်နေလေတော့ ကိုယ့် ဦးနှောက်လည်း ဘာလုပ်လို.လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်လို.ပေါ့…. ကဲ လိမ္မာတဲ့ နှလုံးသားရေ မင်းအတွက် မွေးနေ.လက်ဆောင်အဖြစ် မင်းလိုချင်တဲ့ ဒီပိုးကိုက်ပန်းလေးကိုဘဲ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပါ့မယ်ကွာလို. ဆုံးဖြတ်ပြီး ပန်းလေကို တဖန် ကောက်ယူ ကြည့်မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့….
ဘုရားရေ….. ပန်းလေးက မတော်တဆ ပိုးကိုက်ခံရတာ မဟုတ်ဘဲ ပန်းလေးကိုယ်တိုင်က ပိုးတွေ မွေးမြူထားခဲ့တာပါလား…… ပိုးမွေးထားတဲ့ ပန်းတပွင်.ကို ကိုယ့်နှလုံးသားလေး တခဏ စိတ်ချမ်းသာ ဖို.အတွက် လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် လိမ်မာလွန်းတဲ့ ကိုယ့််နှလုံးသားလေးလည်း ပိုးကိုက်ခံရမှာ သေချာနေပြီပေါ့….. ဘာလုပ်ရမလဲ ပန်းကလေးရယ် ကိုယ့်နှလုံးသားလေး အတွက်……သူက မင်းကို မြတ်နိုးနေရှာတယ်…..
နှလုံးသားလေးကို အမြဲအနိုင်ယူတတ်တဲ့ ဦးနှောက်က ပြောတယ်….. မင်းမြတ်နိုးလို. ပန်ဆင်မယ်ဆိုရင် မင်းလည်း မကြာခင်မှာဘဲ ပိုးကိုက်ခံရလိမ့်မယ် တဲ့.. မင်းခဏဘဲ စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ နှလုံးသားလေးရယ်တဲ့… ပိုးကိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပန်းတပွင့်ကို ပန်ဆင်လို.ရနိုင်ပေမယ့် ပိုးမွေးထားတဲ့ ပန်းတပွင့်ကို ပန်းဆင်ဖို.အထိတော့ မစွန်းစားပါနဲ့တဲ့ …… ဒီစကားကို ကြားလိုက်တော့ နှလုံးသားလေးက ရုတ်တရက် ညိမ်သက်လို. သွားတယ်…..
အော် ဒီတကြိမ်လည်း ဦးနှောက်က အနိုင်ရ သွားခဲ့ပြန်ပြီဘဲ…….
ပိုးမွေးထားတဲ့ ပိုးကိုက်ပန်း ကို နှလုံးသားလေး ပန်ဆင်ဖို. အတွက် လက်ဆောင် အဖြစ် မပေးလို. မင်းစိတ်ကောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်လွတ်ပါတော့ နှလုံးသားလေးရယ်…..
မင်းနှစ်သက်တဲ့ ပန်းက ပိုးကိုကြိုက်တဲ့ ပိုးကိုက်ပန်း တပွင့်မို.ပါ………
ဒီ ပိုးကိုက်ပန်း ဆိုတဲ့ ခံစားချက် စာစုလေးများကတော့ ဂျပန်ပြည်ရောက် မမသွယ်မှ အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ပို့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုလေးများကို ရေးဖွဲ့ ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ လည်း ဒီခံစားချက်လေး များနဲ့ တစ်ထပ်ထဲ တူနေတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု လေးများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုလျှင်ဖြင့် နှလုံးသားကပဲ ဦးနှောက်ကို အနိုင်ယူမလား ဦးနှောက်ကပဲ နှလုံးသားကို အနိုင်ယူနိုင်မလား ဆိုတဲ့ အချက်လေးများကို သေချာ စဉ်းစား သုံးသပ် နိုင်ပြီးတော့ စစ်မှန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လေးများ ချနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း........။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:07 PM 11 comments Links to this post
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး ရဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၄) ရက်၊ သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၄ ခုနှစ်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် (၁) အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တည်ရှိရာ မြိ့လယ်ဆူးခါးတိုက်၊ ၈၃ လမ်း၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃လမ်းကြား၊ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် အတန်းစုံ၌ စာမေးပွဲအောင် ရဟန်း၊ သီလရှင်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ၃၄၁ ပါး အား အောင်လက်မှတ် နှင့် ဘွဲ့လက်မှတ်များအသီးသီး ဆက်ကပ်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုဘွဲ့နှင်းသဘင်ပူဇော်ပွဲတွင် တက်ရောက်ပူဇော်ကြသော ဆရာတော်ကြီးများနှင့် ဘွဲ့လက်မှတ်နှင့် အောင်လက်မှတ် အသီးသီး တို့ ပေးအပ်ခဲ့သော အရေအတွက်မှာ အောက်မှာအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
· ဤဘွဲ့နှင်းသဘင်ပူဇော်ပွဲတွင် သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော် ၁၀ - ပါး၊
· M.A ကထိက ဆရာတော် ၁၇ - ပါး
· ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတန်းစုံ၌ စာမေးပွဲအောင် ရဟန်း၊ သီလရှင်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များ
၁။ M. A. (Indo-Aryan) မဟာဝိဇ္ဇာ (အပိုင်း-၃)မှ ၄ - ပါး
၂။ M. A. (Indo-Aryan) မဟာဝိဇ္ဇာ (အပိုင်း-၂)မှ ၅ - ပါး
၃။ M. A. (Indo-Aryan) မဟာဝိဇ္ဇာ (အပိုင်း-၁)မှ ၆ - ပါး
၄။ M. A. (Buddhism) မဟာဝိဇ္ဇာ (အပိုင်း-၂)မှ ၃ - ပါး
၅။ M. A. (Buddhism) မဟာဝိဇ္ဇာ (အပိုင်း -၁)မှ ၂ - ပါး
၆။ B. A. (Indo-Aryan) ဝိဇ္ဇာစတုတ္ထနှစ်မှ ၂၁ - ပါး
၇။ B. A. (Indo-Aryan) ဝိဇ္ဇာတတိယနှစ်မှ ၂၄ - ပါး
၈။ B. A. (Buddhism) ဝိဇ္ဇာစတုတ္ထနှစ်မှ ၇ - ပါး
၉။ B. A. (Buddhism) ဝိဇ္ဇာတတိယနှစ်မှ ၇ - ပါး
၁၀။ Diploma (P. S. E.) ဒုတိယနှစ်မှ ၆၀ - ပါး
၁၁။ Diploma (P. S. E.) ပထမနှစ်မှ ၁၆၆ - ပါး
၁၂။ Diploma (P. A. B. E.) မှ ၃၅ - ပါး
စုစုပေါင်း ၃၄၁ ပါးအား ဆက်ကပ် ပူဇော် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပခြင်း ဓာတ်ပုံများကို နောက်နေ့တွင် ဆက်လက်တင်ပြဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် မန္တလေး ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ်ကိုလည်း ကြာမှီတွင် www.buddhistuniversitymdy.com ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်သို့ တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။ ယခု http://mandalaybuddhistuniversity.blogspot.com ဖြင့်လည်း ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် မန္တလေး ရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် မန္တလေး အတွက် စာချစာသင်ဆောင်များ လည်း ဗန်းမော်ကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်လျက်ရှိရာ စေတနာရှင် ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း နည်းများဆို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်အပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:50 PM2comments Links to this post